Maitiro ekunyorovesa nharaunda pasina humidifier: iwo akanakisa matipi | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 10/05/2022 12:00 | Imba yeGreen
Kunyanya kuoma uye kunyorova mukati meimba kunokuvadza kuhutano, saka tinofanira kuwana nzvimbo yepakati pakati pezviviri. Kunyanya munzvimbo dzechando uye dzemukati. Kana zvakatipoteredza zvakanyanya kuoma, kune nzira dzakasiyana dzekuwedzera hunyoro hwemhepo mumba, nokuda kweizvi unogona kuisa bhakiti remvura muimba, kudyara mimwe miti mumba kana kuzarura musuo wekugeza. Kune nzira dzekudzidza nzira yekunyorovesa nharaunda pasina humidifier.
Muchikamu chino tinokuudza matipi akanakisa ekuti unganyorovesa nharaunda pasina humidifier.
1 Maitiro ekunyorovesa nharaunda pasina humidifier
1.1 Iva netauro rakanyorova mumba
1.2 Isa bhakiti remvura inopisa muimba
1.3 Dyara zvimwe zvirimwa mumba
1.4 kugeza nemusuwo wakavhurika
2 Mamwe matipi ekuti unganyorovesa nharaunda pasina humidifier
2.1 diridza zvirimwa zvako
2.2 Zadza tangi rehove nemvura
2.3 shandisa mavhasi
2.4 Isa mvura pedyo nekupisa
2.6 kuturika mbatya kumba
2.7 Usasimudze tembiricha zvakanyanya
2.8 Shandisa mavara emukati
Sangano reWorld Health Organisation rinogadza kuti munzvimbo dzine mamiriro ekunze akaoma kwazvo, hunyoro hwemhepo hwakanakira hutano ndi60%. Kana hunyoro huri pasi pe20%, zvinogona kukonzera kushatirwa kwemaziso, kubuda ropa mumhino, ganda rakaoma uye dambudziko reallergies., kunyanya muvanhu vane asthma kana bronchitis.
Aya ndiwo matipi akanakisa ekudzidza maitiro ekunyorovesa nharaunda pasina humidifier:
Iva netauro rakanyorova mumba
Kuparadzira tauro rakanyorova kuseri kwechigaro, bhodhi remusoro, kana bhodhi retsoka inzira yakanaka yekunyorovesa mhepo mumba mako. Yeuka kuti usapeta tauro sezvo zvichigadzira kunhuhwirira kusingafadzi.
Isa bhakiti remvura inopisa muimba
Iri zano rakanaka, hafu yebhakiti yemvura yakakwana muimba, sepedyo sezvinobvira kumusoro wemubhedha kuderedza mhepo iripo yakaoma uye kufema zviri nani usiku. Iwe unogona kushandisa bhaketi remvura yearomatherapy uye kuisa madonhwe maviri emafuta anokosha yelavender mumvura, chirimwa ichi chine zvinhu zvinokubatsira kudzikama uye kuzorora.
Kuchengetedza kunofanira kutorwa kusashandisa nzira iyi mumakamuri evana, sezvo mvura inopisa inogona kukonzera kupisa, kunyanya pasina kutarisirwa nevabereki kana vakuru.
Dyara zvimwe zvirimwa mumba
Zvirimwa zvinonyorovesa kwazvo zvakatipoteredza, kunyanya zvirimwa zvemumvura zvakaita sebakatwa reSt. George, rinozivikanwawo serurimi rwaamai vamwene, uye ferns inovandudza kunaka kwemhepo.
Zvakakosha kuyeuka kuti zvirimwa zvinoda kutarisirwa, mvura chero ivhu risina kunyanya kunyorova uye ziva kana zvirimwa zvichifanira kuiswa kuzuva kana kumumvuri.
kugeza nemusuwo wakavhurika
Nokugeza negonhi rekugezera rakavhurika, unobvumira mhute yemvura kuti ipararire nemhepo, ichinyorovesa nharaunda uye kuita kuti kushandiswa kwemvura inodziya kuve kwakanyanya. Muzhizha zvakanyanya kuoma kushambidza nemvura inopisa, saka hunyengeri hwakanaka siya kugeza ichimhanya nemvura inopisa kwemaminitsi mashoma munhu achiwoma kana kupfeka.
Mamwe matipi ekuti unganyorovesa nharaunda pasina humidifier
diridza zvirimwa zvako
Waiziva here kuti zvinomera zvinobuda? Pamwe hongu, asi mukana hauzive kuti maitiro aya akanaka sei kana zvasvika pakunyorovesa mukamuri. Kana zvidyarwa zvikadiridzwa, zvinodzosera iyo yakakwana muzana yehunyoro kuchengetedza mweya mumba mako mutsva uye wakajeka.
Zvirimwa zvine nhevedzano yemaburi madiki mukati memashizha awo kuti ashande. paunodzidiridza, dzinofambisa mvura dzichienda kumidzi, uye zvikamu izvi zvechirimwa zvinotakura mvura ichienda kumaburi.
Basa rema pores nderokusunungura unyoro uye kuichengeta muimba yavanenge vari. Nenzira iyi, mukamuri umo chirimwa chichava nehunyoro hwepamusoro kupfuura dzimwe nzvimbo dzemba yako. Chero chirimwa chemumba chaunoda chichashanda.
Zadza tangi rehove nemvura
Kana uine tangi hombe hove, izvi zvinogona kukubatsira kuwedzera mwando kunyangwe uine hove kana kwete. Iwe unongoda kuizadza inenge yakazara uye kuiisa zvine hungwaru mukamuri kuitira kuti ibude munzira. Batidza uye rega mhepo ibatane nemvura iri mutangi.
Pamusoro pekukubatsira, izvi zvinogona zvakare kubatsira kutenderedza fenicha uye kudzivirira madziro kana fenicha kubva mukushaikwa kwehunyoro.
Zadza vase nemvura uye isa maruva aunoda. Ava ndivo vachange vachitarisira kuita zvimwechete nezvirimwa. Kunze kweizvozvo, zvinhu zvekushongedza zvinogona kuita kuti imba itaridzike zviri nani.
Isa mvura pedyo nekupisa
Une radiator here? Kuti ushandise kupisa kubva kune hita yako kunyorovesa imba yako, ingochengeta girazi rakazara remvura pedyo nayo, kana kunyange pamusoro peyuniti kana uchida. Iyi nzira inoputika zvishoma nezvishoma mvura, uye mhepo ine basa rekuwedzera hunyoro kune zvakatipoteredza uye kudzivirira kubva pakuoma.
Kubatsira kweiyi nzira ndeyekuti iwe uchashandisa kupisa kuti uwane tembiricha yaunoda, uchikupa mwero uri nani wehunyoro.
izvi ndizvozvo imwe yedzakareruka sarudzo nekuti kubika chinhu chatinoita mazuva ese. Kubika chikafu senge sopu kana kirimu kana kungofashaira mvura kunoburitsa hunyoro uye kunoita kuti nharaunda isanyanya kuoma.
kuturika mbatya kumba
Kuti varambe vakachena uye vadzivise kutora nzvimbo yakawanda, vanhu vazhinji vanoturika mbatya dzavo kunze kwemba. Zvisinei, kuturika mbatya dzakanyorova mukati memba kunogona kubatsira kunyorovesa mhoteredzo. Uyezve, unogona kunyura mukamuri ne detergent yakashandiswa.
Usasimudze tembiricha zvakanyanya
Kuchengeta nharaunda ichitonhorera zvishoma kunokupa hunyoro hwepamusoro, sezvo kuvhuvhuta kupisa kuriko chikonzero chekutanga chekupisa kwakanyanya kunotungamira kunzvimbo dzakaoma. Fukidza nebhachi negumbeze uye udzivise kutsamira kune izvo zvekunze zvinopisa kuti ugare uchidziya.
Shandisa mavara emukati
Chekupedzisira, kutenga tsime remukati kunogona kuita mari asi zvakare kunogona kukubatsira kushongedza imba yako. Zvigadzirwa izvi zvinouya muhukuru hwakasiyana uye magadzirirwo, saka unogona kusarudza iyo inoenderana nezvaunofarira.
Zvakanakisa zvezvose, kuteerera kurira kwemvura inodonha kunozorodza iwe, saka iwe unogona kubatsirwa nekushongedza, kuzorora uye kunyorova nechigadzirwa chimwe.
Kutevera matanho mashoma kunogona kukubatsira kuwana humidification iri nani pasina nguva, zvisinei, kutevera nhanho shoma panguva imwe chete kuchaita kuti imba yako isvike pakunyorova kwemazinga pasina nguva.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekunyorovesa nharaunda pasina humidifier.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Maitiro ekunyorovesa nharaunda pasina humidifier
kinetic uye simba rinogona kuitika